Ciyaaraha – Radio
Liverpool ayaa lagu soo warramayaa in ay diyaar u tahay in ay soo qaadato walaalka ka yar Eden Hazard ee Thorgan. Thorgan Hazard ayaa waqtiga katirsan kooxda ka ciyaarta Bundesliga ee Borussia Moenchengladbach, balse xidigan ayay suurta gal tahay in uu...
Saxiixyada la rajeenayo bisha Janaayo inay dhacaan kooxaha EPL ayay xogtaan u badan tahay: Douglas Costa Manchester United Kalidou Koulibaly Manchester United Gonzalo Higuain Chelsea Alvaro Morata AC Milan Cesc Fabregas AC Milan Nicolas Pepe Arsenal Nikola Milenkovic Manchester United...
Sida ay warinayaan wargeesyada ka soo baxa gudaha Germany oo ugu horeeyo Bild, Kooxda Blues ayaa ku guuleesatay loolanka loogu jiray wiilka reer America ee Christian Pulisic kasoo ay ku qaadan doonaan aduun lacageed dhan £45 million, waxa uu imaan...
Horyaalka kubadda cagta Talyaaniga, waxa toddobaadkan ay ciyaartooyadu noqon doonaan kuwa aanay taageereyaashu arki doonin midabkoodii saxda ahaa ee ay ku yaqaaneen, kaddib markii maamulka horyaalku uu go’aamiyey in laacibiinta midab laga mariyo wejiga. Horraantii xili ciyaareedkan ayaa kulamadii horyaalka...
Walaalka xiddiga weerarka kaga ciyaara kooxda Borussia Dortmund Pierre-Emerick Aubameyang ayaa ka gaabsaday in walalkii uu ku biirayo kooxda AC Milan. Willy Aubameyang, oo ah walaalka xiddiga weerarka kaga ciyaara kooxda Dortmund sidookalana ah ciyaaryahan kubadda cagta ciyaaara ayaa waxaa...
Tababare Arsene Wenger ayaa shaxdiisa kulanka Community Shield ka saaray dhawr ciyaartoy oo muhiim ah inkastoo la sharaxay sababta dhamaantood looga saaray kulanka muhiimka ah ee ay la leeyahiin Chelsea. Alexis Sanchez ayaan kusoo bilaaban kulanka inkastoo jamaahiirta kooxda ay...
Maalqabeenka Caalamka ka yaabiyey ee dhawaan lasoo Wareegay Cayaaryahanka caalamka oo dhan ugu qaalisan ee Neymar Nasser Al-Khelaifi oo ah milkiilaha kooxda PSG ayaa fariin goodin ah u diray kooxda Arsenal oo uu ka doonayo Xiddiga dalka Chile ee Alexis Sanchez. Nasser...
Tababaraha Chelsea Antonio Conte ayaa meesha ka saaray wararka xanta ah ee sheegaya inay Chelsea lacag badan ku qarash gareyn doonto saxiixa hal ciyaaryahan oo weyn xagaagaan. Chelsea ayaa lala xiriirinaayey inay lasoo wareegeyso midkood xiddigaha Gareth Bale iyo Kylian...
Arsenal ayaa talaabadii ugu dambeysay u qaadeysa soo xerogalinta Thomas Lemar iyadoo isku diyaarineysa iney ka gudbiso dalab dhan 50 Malyan oo Pound sida uu warinayo wargeyska Mirror ee ingiriiska kasoo baxa. 21-jirkaan heerka caalami muddo badan ayuu bartilmaameed u...